စက်ရုံစိတ်ကြိုက် - - တရုတ်ဖန်ဆင်းဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်း Parfit
ပရိုဖိုင်းကို Bende စက်
ပန်းကန် Bende စက်
4 Roll ပြား Bende စက်
3 Roll ပြား Bende စက်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်း
Hydraulic စာနယ်ဇင်းဘရိတ်ထိန်းချုပ်ထား CNC ကိုနှစ်ချက် Servo Pump
Electro-Hydraulic Servo စာနယ်ဇင်းဘရိတ်
ဟိုက်ဒရောလစ် Guillotine မှေးညှပျ
Parfit 10 နှစျကျြောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဟိုက်ဒရောလစ်ပုံနှိပျထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီအဆိုပါဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းကွဲပြားခြားနားသော types.like4post ကိုဟိုက်ဒရောလစ်သတင်းစာ, C ကိုဘောင်နဲ့ H ကိုဘောင်ဟိုက်ဒရောလစ်သတင်းစာသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
သတ္တုပြား Hydraulic Press ဖွဲ့စည်းခြင်း
အဆိုပါအောက်ပါ related Hydraulic Press ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. â€
အောက်ပါနှင့် ပတ်သက်. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဟိုက်ဒရောလစ်ပုံနှိပျ၏လျှောက်လွှာအကြောင်း, သင်တို့ကိုငါပိုကောင်းတစ်လောကလုံးဟိုက်ဒရောလစ်ပုံနှိပျ၏လျှောက်လွှာကိုနားလည်ကူညီရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
4 Post ကို Servo Drive ကို Hydraulic စာနယ်ဇင်း
အောက်ပါအကြောင်းကို4Post ကို Servo Drive ကို Hydraulic စာနယ်ဇင်း related ဖြစ်ပါသည်, ငါသည်သင်တို့ကိုပိုကောင်း4Post ကို Servo Drive ကို Hydraulic စာနယ်ဇင်းနားလည်ကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
4 ကော်လံ CNC Hydraulic စာနယ်ဇင်း
Hydraulic & C က Frame ကဟိုက်ဒရောလစ် Press
အောက်ပါ related Hydraulic ကို C Frame က Hydraulic Press အကြောင်း, သင်တို့ကိုငါပိုကောင်း Hydraulic ကို C Frame က Hydraulic Press နားလည်ကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ထုံးစံကို C Frame က Hydraulic Press
အောက်ပါ related စိတ်တိုင်းကျကို C Frame က Hydraulic Press အကြောင်း, သင်တို့ကိုငါပိုကောင်းစိတ်တိုင်းကျကို C Frame က Hydraulic Press နားလည်ကူညီပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Parfit ဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်း ထုတ်လုပ်အတွက်အထူးပြု။ အခြေခံအုတ်မြစ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်လိုက်စားခဲ့နှင့်ငါတို့ရည်မှန်းချက်အဖြစ်ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်။
ဘုံဟိုက်ဒရောလစ် Bende စက်အမှား
CNC4Roll ပြား Rolling စက်
အပြည့်အဝ Hydraulic4Roll ပြား Bende စက်
စက်ငုံ့ဟိုက်ဒရောလစ်3Roll ပြား
အချိုးကျ3Roll ပြား Bende စက်
လိပ်စာ: မြင့်မားသောနည်းပညာဇုန် Haian စီးတီး, Jiangsu ပြည်နယ်
ဖုန်းနံပါတ်: +86-158 5134 1020
ဖက်စ်: +86-513-8866 3659
2019 Parfit အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ (Jiangsu) Co. , Ltd All Rights Reserved @ မူပိုင်။ links Sitemap RSS XML